Waa Kuwama Wasiiradda Cusub Ee La Filaayo Inay Kamid Noqdaan Golaha Wasiiradda Ee Madaxweyne Biixi ?.
Wednesday November 29, 2017 - 08:57:00 in Wararka by Halgan News
Hargeysa(Halgan)Shacabka Somaliland ayaa weli u dheg taagaaya magcaabista golaha Wasiiradda ee xukumada Cusub , iyada oo ay sidoo kale buux dhaafiyeen guriga uu ka degan yahay Hargeysa madaxweynaha cusub ee Somaliland.
Waxaana la filayaa inuu madaxweyne Muuse Biixi soo magcaabo Gole wasiiro oo cusub, kuwaas oo dadka abaaraha iyo sicir bararku daashadey wax u qaban kara.
Inta badan waxa dadku hadal hayaa ama falanqaynayaan cidda la filan karo inuu magcaabo, iyada oo dadkaasi ay u badan yihiin dhiigii cusbaa ee waqtiyaddii ugu dambeeyey kusoo biiray xisbiga KULMIYE.
Dadka aadka loo hadal hayo ee ay shabakada Halgannews qoraalka ka samaysay waxa kamid ah Professor Axmed Ismaacil Samatar oo isagu ah aqoonyahan reer Somaliland ah, kana soo shaqeeyay wadanka Maraykankan, waxaanu ku takhasusay cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Waxa kale oo kamid ah Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo isna kamid ah dhiiga cusub ee aan hore xilal uga qaban Somaliland, marka laga reebo inuu noqday murashax madaxweyne ee Xisbiga UCID.
Jamaal Cali Xuseen ayaa hore uga soo shaqeeyey Qurbaha gaar ahaana City Bank oo uu muddo dheer ka shaqaynaayey, waxaanay dadku u badinayaan in loo magcaabo laba jago mid uun, kuwaas oo kala ah Wasaaradda Maaliyadda ama Bangiga Dhexe, madaama oo uu aqoon u lee yahay Baanankagana waxa lagu rajo weyn yahay inuu wax weyn ka qabto Sicir Bararka shacabkan taagta daran naafeeyey.
Cabdilaahi Maxamed Ducaale ayaa isna ah shaqo shacabku hadal hayo, iyada oo uu hore u ahaa Wasiirkii Arrimaha dibadda dawladii Rayaale, waxa kale oo uu hore usoo noqday wasiirkii maaliyaddii ee xukumadii Madaxweyne Cigaal iyo wasiirkii warfaafinta ee xukumadaasi.
Siyaasigani maaha dhiig cusub oo waa nin hore usoo maray xukumado kala dambeeyey, laakiin waxaa lagu xusuustaa kaalintii weynayd ee uu kasoo ciyaaray arrimaha Dibadda Somaliland.
Edna Aadan ayaa iyaduna kamid ah dadka ay shacabku aadka u hadal hayaan, waana muwaadinad qarannimada Somaliland aad ugu dheer tahay, waxay hore usoo noqotay wasiirka Arrimaha Dibada Somaliland, sidoo kale waxay hore usoo noqotay wasiiradda arrimaha qoyska Somaliland dawladii Rayaale .
Axmed Muumin Seed waa siyaasi ku cusub saaxada siyaasadda Somaliland, waxaanu kamid yahay dhiiga cusub ee Somaliland siyaasadeeda kusoo biiray, waxa uu hore usoo ahaa guddoomiye ku xigeenkii kowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI , waxa kale oo uu kamid ahaa garbihii sida weyn ugu ololaynaayey madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi .
Waxa jira siyaasiyiin kale oo iyagana la filaayo inay kusoo boodaan saaxadda siyaasadda Somaliland, gaar ahaana Golaha Wasiiradda iyo wasiir ku xigeenadda oo ay wehelin doonaan Agaasimeyaasha kala duwani, kuwaas oo aan ilaa hadda la ogayn cidday noqon doonaan.
Waxaana la filayaa in uu toddobaadyada soo socda magcaabo madaxweynaha cusub ee Somaliland Golihiisa wasiiradda ee Cusub, kuwaas oo ay hor yaalaan arrimo badan oo culayskooda lihi.